Fialantsasatra mankany Las Alpujarras any Granada | Vaovao momba ny dia
Carmen Guillen | | Fialan-tsasatra, España, Granada
Efa manakaiky ny datin'ny fitsangatsanganana, ary ankehitriny miaraka amin'ny ririnina-ririnina, miaraka amin'ny fahatongavan'ny hatsiaka, izay mamely, izay mahasarika dia tsara fialamboly ambanivohitra. Amin'ity lahatsoratra ity dia mazava tsara ny anjarako: Fitsangatsanganana mankany Las Alpujarras any Granada. Afaka miaraka aminay ve ianao?
1 Làlana fitetezana Alpujarra
2 Gastronomy tena tsara
3 Inona no ho hita ao amin'ny La Alpujarra
Làlana fitetezana Alpujarra
Nanomboka izahay ny zotram-piaramanidina Alpujarra ao amin'ny resort amoron-dranomasina any Lanjarón (eny, toa anao tokoa izany), malaza amin'ny kalitaony rano fanafody sy ny toetrany maina sy mangatsiaka.
Raha mandeha amin'ny làlana isika, efa ao amin'ny fihodinana voalohany, dia ho afaka jerena izay hitranga, na eo aza ny karazany anatiny, ny mpiorina amin'ny tontolon'ny Alpujarra:
Lohasaha goavambe izay midina avy Sierra Nevada.
Sehatra maina akaikin'ny ala mikitroka.
Ranon-dranomandry akaikin'ny boulevards misy oleanders.
Manohy ny dianay an-dàlana, avy any Lanjarón dia mankany Orgiva, renivohitra andrefan'i Granada Alpujarra. Ny Orgiva dia azo raisina ho toy ny tanàna manomboka ny maro fitsangatsanganana notarihina mankany amin'ny faritra ambony amin'ny Alpujarra.
Manohy izahay ary ankehitriny dia mankany amin'ny faritra tsara indrindra amin'ny Alpujarra, fantatra amin'ny anarana hoe Havoana Poqueira. Lohasaha rakotra hazo kastnut taloha izy io, izay misy tanàna kely telo sy vohitra fotsy Andalusia mahazatra. Izy ireo dia: Bubión, Capileira ary Pampaneira, izay miakatra ambony noho ny iray hafa, mamorona ny tehezan'i Mulhacén, tampon-tampona avo indrindra amin'ny saikinosy ary koa iray amin'ireo sary mahafinaritra indrindra ao Andalusia.
Raha manohy miatsinanana isika dia hitondra antsika any amin'ny tanànan'ny Trevélez, miorina amin'ny lemaka atsinanana amin'ny Mulhacen. Manana mihoatra ny 1.500 metatra ny haavony, manao azy ho tanàna avo indrindra eran'i Eropa. Alao an-tsaina ange ny hatsiaka eto amin'ity tanàna ity amin'ny ririnina! Mazava ho azy, ny fofonaina ny rivotra ao Trevélez dia fahadiovana miaina. Ireo kisoa izay mamaky ny kijanany malaza dia tsy maintsy mieritreritra mitovy, satria ny ham-tongony dia iray amin'ireo malaza indrindra manerantany.
Ny maritrano tsy manam-paharoa an'ny La Alpujarra any Granada dia nambara mihoatra ny zava-drehetra ao amin'ny Trano Capileira: izy ireo dia trano fotsy sy toratelo izay miakatra iray eo an-tampon'ny iray hafa, mamorona ireo tehezan-kazo geometrika mahazatra an'ny tontolon'ny Alpujarra. Ny fisongadinana iray hafa amin'ny mampiavaka ity karazana fananganana ity dia ny fonosin'izy ireo Ny fantsika, karazana tanimanga volondavenona izay tsy hita afa-tsy amin'ity faritra ity sy any Tonizia (amin'ny tanàna avaratra manokana).
Raha manohy mamaritra ny Baja Alpujarra isika dia tsy maintsy asehontsika fa ao amin'ny Sierra de la Contraviesmankany Ity tandavan-tendrombohitra ity dia misy ny tananan'i Ugíjar, Cádiar, Válor na Yegen. Avy eo avelantsika hiditra ao Granada Almeria, manokana ao Laujar sy Andarax, miaraka amin'ny Tany maina sy maina ary miaraka amin'ny tsy manam-petra amin'ny hazo rofia, persimmons, oleanders ...
Araka ny hitanao, La Alpujarra dia tsy any Granada ihany fa miditra any Almería ary miditra kely ihany koa Malaga mba hahafahanao mahazo hevitra momba ny refy.
Gastronomy tena tsara
Ny miresaka momba ny gastr gastrika tena tsara an'io toerana io dia toy ny manambara ny menio fisakafoanana fisakafoanana mahazatra any Andalusian izay misy fisalasalana lehibe momba izay tokony hanafarana satria tsara ny zavatra rehetra ary toa matsiro daholo ny zavatra rehetra.
Ankoatra ny sakafo mahazatra Andaliana Fantatra amin'ny anarana hoe gazpacho, trondro nendasina, oliva na tongolo fotsy, amin'ity làlana ity isika dia afaka mahita vokatra mahatalanjona maro hafa izay nahandroana lovia tsy azo resena. Andao hodinihintsika ny sasany amin'izy ireo:
Vokatra voajanahary sy / na voahodina: Tsara ny manonona ireo saosisy sy menaka oliva avy amin'ny Serranía de Ronda; ny voan'ny subtropika ao Almúñecar, toy ny paoma custard, manga, avocado, ... saosisy avy amin'i Trévelez. Raha tianao SIRAMAMY Azonao atao ihany koa ny mahita karazany maro amin'izy ireo: hena quince, syrup, alfajores, donky brandy, mofo aviavy, vatomamy Antequera, bacon, sns. Ary raha ny ronono no fanananao, indrindra fromazyIlay ao amin'ny Serranía de Ronda, ny Grazalema, ny Alpujarras ary ny fresco avy any Malaga dia tokony hasongadina.
Divay sy zava-pisotro hafa: Ny Divay Malaga Tena tsara tarehy izy ireo ary ny Motril cane rum zavatra andramana tsy misy fisalasalana. Misongadina ihany koa ny mozika malaga sy ny marika avy any Ojén. Ny iray hafa efa voatonona ato amin'ity lahatsoratra ity ary azo antoka fa ho fantatry ny rehetra, ny rano tavoahangy avy ao an-tanànan'i Lanjarón, tena malaza manerana an'i Espana.
Lovia isam-paritra mahazatra: Ny tsaramaso midadasika mankany amin'ny rondeña, ny trondro avy any Malaga sy Almuñécar, ny ovy ao amin'ny tongolo lay-pennyroyal, ny dipoavatra a la malagueña, ny zaza misy tongolo lay, ny lasopy Granada, ny lasopy amandy, ny sardine moragas avy any Motril, ny omelette «sacomonte», ny Granada pinchos, ary ireo lamba an-dranomasina, dia anisan'ny lovia hafa izay tsy tokony hatsahatrao ny manafatra raha mitsidika trano fisotroana na trano fisakafoanana any amin'ireo tanàna voalaza etsy aloha ianao.
Inona no ho hita ao amin'ny La Alpujarra
raha matory nataon'i Capileira tsy tokony halahelo ireto tranonkala manaraka ireto ianao:
Ny lagoon kaldera.
Ny tampon'ny Veleta.
Ny fiangonan'i La Cebadilla
Raha mandeha avy amin'i Pampaneira, ireo tranonkala ireo dia tsy maintsy tsidihina:
La Moralea Winery, izay ahafahanao mandeha amin'ny hams tsara mankany amin'ny saosisy isan-karazany.
Ny fiangonana ny lakroa masina.
Fivarotana Abuela Ili, toerana amarotany sôkôla artisanina manan-karena 100%.
Ny tsenan'i Pampaneira.
Ny reniranon'i Pampaneira.
Raha ao an-tanànan'i Lanjarón:
Ny Castle an'i Lanjarón.
Ny fomba fijery Cañona.
Ny herin'i San Sebastián.
Ny Salado Park.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialantsasatra any Eropa » España » Fitsangatsanganana mankany Las Alpujarras Granada
Mandehandeha any amin'ny Jurassic any Dinópolis Teruel